Daryeelayaasha | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Caawimaada loogu talagalay dadka daryeela dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba Context link
Tallooyinka sida fudud loo isticmaali si looga caawiyo daryeel bixiyeyaasha inay dhagaystaan oo ay ula wadaagaan macluumaadka si wax ku ool ah oo hufan.
Tallooyinka lagu caawinayo daryeel bixiyeyaasha inay ogaadaan waxa la sameeyo ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib ballamaha caafimaadka ee ku aadan qofka aad daryeesho.
Sida loo ogaado marka waalidka da'da ah ama qof ay jecel yihiin ay u baahan karaan daryeelsiin, iyo taageerada dheeraadka ah ee qorshe caafimaad ee laba-qof u qalmaha ay bixin karan Context link
Ka caawinta qof waayeel ah ama qof qaba naafonimo inuu cuno cunto caafimaad leh way ku adkaan kartaa daryeelayaasha. Talooyin kaa caawinaya qofka aad daryeesho inuu sameeyo doorashooyin cunto oo caafimaad leh.
Waa caadi in daryeelayaashu dareemaan daal, walbahaar iyo shucuuro kale. Ogaanshaha xirfadaha la qabsiga si ay gacan uga geystaan maaraynta dareenkaaga waxay ka dhigi kartaa doorkaaga daryeele ahaan mid guulaysta oo faa'iido leh
3 tilmaamaha sida loo caawiyo daryeelayaasha fog si ay u daryeelaan qof meel fog jooga
Inaad noqoto daryeelaha fog ee qof waayeel ah ama qof qaba naafonimo marnaba ma sahlano. Talooyin kaa caawinaya inaad uga adeegto daryeele ahaan meel fog.
Daryeel siinta dadka qaba naafanimada.
Daryeelidu aad ayay u dhib badan tahay marka aad daryeelayso qof qaba naafonimo. Ogow wax ku saabsan dhigaalada caawiya daryeelayaasha dadka waaweyn iyo carruurta qabta baahiyaha gaarka ah.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.17.2022 waqtiga 01:53 GALABNIMO CDT